Yakanakisa LDPE gobvu Kuvaka Firimu Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
LDPE gobvu rekuvaka firimu, inonziwo LDPE gobvu rekuvaka firimu, rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka pendi. Iyo masking firimu inogona kuve yakakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa.
✦ Zvinyorwa: LDPE nyowani kana LDPE yakadzokororwa
Ruvara: Rakajeka, Semi-yakajeka, Girini…
Saizi: 1x50m, 2x50m…
Ick Yakakora kupfuura yakajairwa masking firimu. Hazvisi nyore kuputswa, uye zvinogona kushandiswa kakawanda.
LDPE gobvu rekuvaka firimu, inonziwo LDPE gobvu rekuvaka firimu, rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka pendi. Iyo masking firimu inogona kuve yakakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu zvinogona kuve nyowani LDPE kana zvishandiswezve LDPE, inova yakawanda iri gobvu kupfuura yakajairwa masking firimu. Nekudaro, hazvisi nyore kuputswa, uye zvinogona kushandiswa kakawanda. Mhando zhinji dzeODPE mhando dzinogona kusarudzwa
LDPE yekuvaka firimu yakawanda yakapetwa kusvika pakukura saizi kuitira kuti zvive nyore kushandisa. Iyo masking firimu yaizovandudza yako yekupenda basa kugona, chengetedza vashandi / nguva nemari.
LDPE gobvu rekuvaka firimu, inonziwo LDPE gobvu rekuvaka firimu, rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka pendi.
Iyo masking firimu inogona kuve yakakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa. Izvo zvinhu zvinogona kuve nyowani LDPE kana zvishandiswezve LDPE, inova yakawanda iri gobvu kupfuura yakajairwa masking firimu.
Nekudaro, hazvisi nyore kuputswa, uye zvinogona kushandiswa kakawanda.
Mhando zhinji dzeODPE mhando dzinogona kusarudzwa.
Nhoroondo: LDPE gobvu Kuvaka Firimu
- LDPE zvinhu.
1 roll / bhokisi
Pashure: Floor Kudzivirira Firimu
Zvadaro: HDPE ZVAKAWANDA KUVAKA FILM